I-AirTag elahlekileyo inokufumaneka nokuba usebenzisa i-Android | Ndisuka mac
Okokugqibela u-Apple wayivelisa loo marhe (andazi ngaphandle kokufuna) I-AirTag. La macandelo amancinci aya kusinceda sigcine izinto zethu zihlala zibulelwe kukufumana umsebenzi wam. Izolo bezisiwe kusetyenziswa ividiyo ehlekisayo eneenkwenkwezi esofeni. Kodwa eyona nto ibaluleke kakhulu okanye ubuncinci bezinye zezinto ezenza ukuba le mveliso ibonakale kukuba iyahambelana ne-NFC. Oku kubalulekile kuba kwenzeka ntoni xa siphulukene ne-AirTag? Nasiphi na isixhobo seNFC siya kudibana nabo kwaye sinokuzilandela kwaye sazise umnini wazo.
Xa i-AirTag ibekwe kwimowudi elahlekileyo, Zonke izixhobo ezinesakhono se-NFC, kubandakanya nezo ziqhuba i-Android, zinokufunda umyalezo wokufumanisa kwangaphambili we-locator, into encinci kodwa enokubaluleka enokubanceda ekubuyiseni izinto ezilahlekileyo. Ke ubuncinci inokuchazwa kwinto esekwe kuxwebhu lwenkxaso entsha enika iinkcukacha ezongezelelweyo ngokusebenza.
Ngokuka-Apple, ngokuchola kunye nokuchukumisa indawo emhlophe ye-AirTag elahlekileyo kwisixhobo esikwaziyo se-NFC ukuhambisa kwakhona iphepha lewebhu elinokubonisa inombolo yomnini. Ulwazi olongezelelekileyo olufana nenombolo yesiriyeli ye-AirTag ikwabonelelwe. Abasebenzisi beAirTag kufuneka banikezele ngolwazi lwabo loqhakamshelwano Ngexesha lokuseta. Kananjalo nokubeka isixhobo kwimowudi elahlekileyo ukuze oku kusebenze.
Unokujonga umyalezo weNdlela elahlekileyo nakweyiphi na i-smartphone ene-NFC, njenge-iPhone okanye ifowuni ye-Android.
Lo msebenzi unokuba luncedo kakhulunangona indlela ephambili yonxibelelwano ye-AirTag yirediyo ye-ultra-wideband. Iphunyezwe kwi-chip ye-U1 ye-Apple, ethumela i-pulses kwezinye izixhobo ze-U1 ezixhotyiswe njenge-iPhone. Ikwasebenzisa iBluetooth ukunxibelelana nezixhobo zeApple. Ulwazi malunga nee-AirTag ezikufutshane kunye nedatha yendawo enxulumene nayo iya kuthunyelwa kuFumana inethiwekhi yam.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-AirTag elahlekileyo inokufumaneka nokuba usebenzisa i-Android
"Molo iMac entsha" sisibhengezo esisemthethweni seApple